December 2, 2014 – democracy for burma
#UNFC #ပထမအကြိမ်ကွန်ဂရက် #F.U.A ၏ အထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၈.၁၁.၂၀၁၄ မှ ၂၉.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး
On December 2, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
မြန်မာတပ်မတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် စစ်ဆင်မှုများ ရန်လိုမှုများကို ချွင်းချက်မရှိ ရပ်ဆိုင်းရန် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် (F.U.A) စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ တောင်းဆို
UNFC ပထမအကြိမ်ကွန်ဂရက် F.U.A ၏ အထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၈.၁၁.၂၀၁၄ မှ ၂၉.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး UNFC ၏ကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံ ၊ ဒုတာဝန်ခံတို့၏ ဦးဆောင်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် (၁၁) ဦး အကြံပေးနှင့် လေ့လာသူအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၁၅) ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများသည် တစုံတရာ နီးစပ်မှုရှိလာခဲ့သော်လည်း စက်တင်ဘာလ ညှိနှိုင်းပွဲတွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ကြီးများက နောက်ကြောင်းပြန်အဆိုပြုချက်များ အတင်းအကြပ်တင်သွင်းလာခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ မူ(၆)ချက်ကို အခိုင်အမာထပ်မံတင်ပြလာခြင်း …
#အမျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုသည်မှာ (၁)” #Burma’s #MYANMAR #religious #conversion #law 2014 (draft)
အမျိုးစောင့်ဥပဒေဟူသည် လုံခြုံရေးဥပဒေပင်ဖြစ်သည်။ တစ်မျိုးသားလုံး လုံခြုံရေး၊ တစ်သာသနာလုံး လုံခြုံရေး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး လုံခြုံရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေသော ဥပဒေကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာလုံခြုံရေး၊ ဗမာလူမျိုးလုံခြုံရေး တစ်ခုတည်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်စရာ ရှိသည်။ အမှန်အားဖြင့် ဘာသာမျိုးစုံ လုံခြုံရေး၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ လုံခြုံရေးပင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဘာသာအားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံး အမျိုးစောင့်ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ရရှိ ကြမည်ဖြစ်သည်။ လူမျိုးကြီး ဘာသာကြီးက လူမျိုးငယ် ဘာသာငယ်များကို အနိုင်ကျင့်၍ မရနိုင်သလို လူမျိုးငယ် ဘာသာငယ်တစ်ခုခုကလည်း လူမျိုးကြီး ဘာသာကြီးကို ပြစ်မှားစော်ကား၍ မရနိုင်တော့ပေ။ ဘာသာလူမျိုးအားလုံး သူ့စည်းနှင့်သူ ကိုယ်စည်းနှင့်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်စည်းနေထိုင်နိုင်ရေးကို ရှေးရှု ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေဖြစ်သည်။
(ဂ) တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးရေး ဥပဒေ
(ဃ) လူဦးရေ ထိန်းညှိခြင်းဥပဒေဟူ၍ ဥပဒေခွဲလေးရပ်ရှိပေသည်။ အမျိုးစောင့်ဥပဒေဟူသည် ထိုဥပဒေခွဲ လေးရပ်လုံးကို သိမ်းကျုံး၍ ခေါ်ဆိုထားသောအမည်ပင်ဖြစ်လေသည်။
(က) ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ အဘယ့်ကြောင့်လိုအပ်သနည်းဆိုလျှင် ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက် လာသောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
မိန်းကလေးဆန္ဒမပါဘဲ လင်ဖြစ်သူနှင့် လင်ဖြစ်သူ၏ အသိုင်းအဝိုင်းကို မလွန်ဆန်နိုင်သောကြောင့် မိခင်ဘာသာ တရားကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရသည့် အန္တရာယ်မျိုးပင်ဖြစ်လေသည်။ မိန်းကလေးက ကျေနပ်လျှင် ကိစ္စမရှိသော်လည်း မိန်းကလေးက မိခင်ဘာသာကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ တင်းခံနေလျှင် သို့တည်းမဟုတ် မိခင်ဘာသာကို မစွန့်လွှတ်နိုင်၍ လင်မသိအောင် ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် ကျင့်သုံးနေလျှင် ပြဿနာရှိလာလေသည်။ ထို့အပြင် မိန်းကလေးဆန္ဒပါသည့်တိုင် ထိုမိန်းကလေး၏ မိဘ အုပ်ထိန်းသူများ မသိလိုက်ရဘဲ လူမသိ သူမသိ တိတ်တိတ်ပုန်း ဘာသာကူးပြောင်းလိုက်ရခြင်းသည် အန္တရာယ်တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့သော အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေလိုအပ်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။ Continue reading “#အမျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုသည်မှာ (၁)” #Burma’s #MYANMAR #religious #conversion #law 2014 (draft)” →
#THAILAND #LONG #LIVE #YOUR #ROYAL #HIGHNESS #OUR #GREAT #KING.
On December 2, 2014 December 3, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS. ALL EYES CAN SEE THE LOYALTY AND DEDICATION OF K. PRAYUTH TO PUT THIS NATION BACK INTO THE RIGHT DIRECTION WITHOUT ANY MORE DEVIATION.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จไปทุกหนแห่งไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วย หรือจะดินแดนแห่งนั้นจะทุรกันดารเพียงใด ไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน พระองค์จัดทำโครงการพัฒนาชนบท ตาม แนวพระราชดำริควบคู่ไปในทุกๆ ด้าน ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง พระองค์มีจุดประสงค์เดียวคือ เพื่อ ขจัดความทุกข์ยากของชาวชนบทและสนับสนุนส่งเสริม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาสังคมเมืองให้ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริ หลายโครงการที่เกิดขึ้น จากความรับผิดชอบ ของ หน่วยงานต่างๆ
#THAILAND #Thomas #Andrew #Ericson, #US #rape #suspect #ARRESTED
On December 2, 2014 By Burma Myanmar newsIn Asean, ThailandLeaveacomment
Concerns are being aired about hiring private English teachers and how the decision to send your children to private language schools can put them in dangers since the arrest of Thomas Andrew Ericson,aUS rape suspect who fled to Thailand where he worked as an English language instructor.
The man was arrested last Wednesday night at the Moo Ban Klang Muang in Samut Prakan’s Muang district. The Crime Suppression Division wanted parents and school administrators to take this asawarning. According to reports he man from the USA was usingafake UK passport to apply for teaching jobs in the area, all the time he was on the run from rape charges in his home country.
The CSD were contacted by the US embassy on the 15th of September when they were asked to search foradangerous person wanted by the authority in Denton Country and Harris County Texas. The 47 year old is considered dangerous due to the nature of his crimes, and due to mental illness. It is thought the man is suffering from bipolar disorder. The illness could be responsible for his ability to pass off asareliable English teacher on the one hand andasexual predator on the other.
It has been reported that the man has also committed crimes in the nation’s capital Bangkok. He has been accused of raping and injuringaThai woman inajewellery shop in Bangkok in 2011 and is wanted by the Hua Mak police who were grantedawarrant for his arrest by the Criminal Court. Continue reading “#THAILAND #Thomas #Andrew #Ericson, #US #rape #suspect #ARRESTED” →
#MALAYSIA #BURMA #MYANMAR #23 #BUDDHISTS #KILLING #SOLVED
A police source who disclosed these details saidaspecial task force from Bukit Aman managed to piece together the story after picking upakey suspect,aMuslim from the Arakan district in Myanmar, last week. The suspect reportedly led police to six other suspects who were also detained to assist in the probe into the killings of the 23 Myanmar nationals.
AUNG GYI(GSC) KILLED IN MALAYSIA
GEORGE TOWN: Police have concluded that the savage killings of 23 Myanmar nationals, males aged between 20 and 40, in Penang recently were linked to ethnic tensions between Buddhists and Muslims in Myanmar.
The main suspect has since confessed, according to the source, that he hadahand in the killings.
“The main suspect said six of his family members were killed during communal clashes in his home stateayear ago. We are now piecing the connection between all 23 cases to see if they were linked,” the source said.
“The root of the killings has been identified and we hope to wrap up investigations in the next few weeks.”
Penang police chief Abdul Rahim Hanafi, inabrief statement, confirmed that seven Myanmar nationals had been detained following the recent rise in the number of foreigners killed in the state.
“So far, they have been very cooperative. We have had some developments regarding the suspects,” he said in advising the public not to speculate.
#အိန္ဒိယနိုင်ငံ #ဘာဒွမ်ပေါက်ကွဲမှုနှင့် #ပတ်သက်သည့် မြန်မာ ၃ ဦးကို #ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲဖမ်းဆီး
ပတ်သက်သည့် မြန်မာ ၃ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲဖမ်းဆီး
ဘာဒွမ်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မြန်မာ ၃ ယောက်ကို
အဲဒီ ၃ ယောက်ဟာ
RSO နဲ့မြန်မာအခြေစိုက် တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေက
ဒါက္ကာရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယရဲမင်းကြီး ခရစ်ရှနာ ပါဒါ ရွိုင်က
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားအစိုးရတို့ဟာ အဲဒီအမှုမှာ
ပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေကို အရှိန်မြှင့် ဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှာ နယ်စပ်တလျှောက်က မတရားသင်း ကြေညာထားတဲ့
JMB စစ်သွေးကြွအယောက် ၁၀၀ လောက်ကို
ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Continue reading “#အိန္ဒိယနိုင်ငံ #ဘာဒွမ်ပေါက်ကွဲမှုနှင့် #ပတ်သက်သည့် မြန်မာ ၃ ဦးကို #ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲဖမ်းဆီး” →
#CRIME #รือเสาะ #นราธิวาส #ว. #24นี้ #ปะทะบริเวณเดิมครับ
On December 2, 2014 December 2, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
(2 ธค.) ‪#‎เพิ่มเติม‬ ภาพที่ อ.รือเสาะ นราธิวาส – จนท.ได้ข้าตรวจค้น พบเป็นฐานที่พบมีคนร้ายอยู่อย่างนัอย 6-7 คน แน่นอน ล้วนเป็นพวกวินัยจัด ..และพบถังแก๊สใช้ประกอบระเบิด เป็นอุปกรณ์ต่างๆจำนวนมาก cathaymee
ว.24นี้ ปะทะบริเวณเดิมครับ อ.รือเสาะ – 15.20 น.
ตะกี้ปะทะกันเองครับ เคลียร์ จนท.จับมือกันได้เร็ว เหตุเข้าใจผิดชุดลาดตะเวร อ.รือเสาะ 15.45 น.
ปิดล้อมตรวจค้น ต.อัยเยอร์เวงฯ เบตง ยะลา!
(2 ธค.) เมื่อช่วงสายวันนึ้ – ร.ต.อุดม ดำรงวิทย์ ผ.บ.ร้อย.ฉก.ทพ.3305 ร่วมกับ จนท.3 ฝ่าย โดยมี พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุขภา ผู้การฯ สภ.จว.ยะลา , สนธิกำลัง จนท.ฯ
ได้ปิดล้อม เข้าตรวจสอบพื้นที่ซุกซ่อนอาวุธสงคราม พบอาวุธชนิด AK47 พร้อมซองกระสุน 1 ซอง (ไม่มีกระสุน) ยังไม่พบผู้ต้องสงสัย บริเวณพื้นที่ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา.. รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป ครับ cathaymee